कस्को नयनमा हराईन प्रशना ? हेरौँ भिडियो - pnpkhabar.com
You are at:Home»म्युजिक अपडेट»कस्को नयनमा हराईन प्रशना ? हेरौँ भिडियो
कस्को नयनमा हराईन प्रशना ? हेरौँ भिडियो
By रबि धिताल on १५ पुष २०७४, शनिबार ०३:२२ म्युजिक अपडेट
काठमाडौं, पुस १५: गायिका प्रशना पाण्डेको मायाँको न्याने पन शिर्षकको गीत युटुव मार्फत सार्बजनिक भएको छ । अत्यन्तै फरक शैलीको उक्त म्युजिक भिडियोमा प्रशना आँफैले अभिनय समेत गरेकी छिन भने उक्त गितको लिरिक्स रहेको छ गोबिन्द उपाध्यायको ।
मौनता मेरो तोडी आउ
मायाँमा पल पल रमाउ
आज मलाई भिज्न देउ
अत्यन्तै सुमधुर शब्दहरुको सँगालोको रुपमा उक्त भिडियोले आफ्नो उपस्थीती जनाएको छ। अनिल साहीको सँगित अनि शुरेस राउतको लेखन रोहित बिक्रम कार्कीको निर्देशनमा बनेको उक्त म्युजिक भिडियो आजबाटै हाईलाईट्स नेपालको च्यानलमा हेर्न सकिन्छ ।